Yimaphi ama-cocktails athandwa kakhulu e-Austrian? | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Austria izoba yizwe elincane kepha linomlando namasiko amazwe amaningi amakhulu asaswele. Ngeke ibe ne-gastronomy yase-Italy noma eFrance, kepha ayibi kangako njengaseBrithani nase maqondana neziphuzo, inokwayo ukunikela.
Abase-Austrian babuthana ukuphuza ngokwesiko huipu, izindawo zokucima ukoma lapho bedla khona baphuze futhi kugcwele izwe lonke. Ngasikhathi sinye kunconywa kakhulu izivakashi. Babuthana futhi ukuphuza eBuschen, ezingadini ezingaphandle kwezindawo zokudlela, ngaphandle. Uma usedolobheni noma edolobheni elincane uzophuza iwayini lesifunda, uma useVienna iwayini neziphuzo ezivela ezweni lonke, kufakwe nekhofi. Kepha kuneziphuzo zase-austrian? Uma ezinye.
UClausthaler Stubbser: siyisiphuzo esincane esinambitheka esinezithelo esinikezwa sishisa nasengilazini.
I-Drake cocktail: yisiphuzo esinamandla, esinoshukela esiphuzwa engilazini ye-cocktail.
Umsiki Wenkungu: ingilazi iyindilinga futhi yenziwe ngengilazi futhi inokunambitheka okumuncu okunoshukela ngokugxila okuphakathi kotshwala.
I-Brenner Pass: isiphuzo esincane esinikezwa esishisayo, esilungele ubusika
Fromme helene: Uma uthanda iziphuzo ezinoshukela ze-Baily, lokhu kuyafana. Uswidi, wakhonza ngenkomishi yengilazi.
Igazi Nesihlabathi: Uma ubuza, uzothola isigubhu sengilazi esimise okomtshingo nesiphuzo esimnandi naphakathi.
I-Kopfnuss: Isiphuzo esinewayini elibomvu, i-cognac, i-liqueur ewolintshi, isinamoni, ama-clove noshukela. Ilungiswa ebhodweni eliphezu komlilo futhi iphakwa ifudumele noma ishisa.
Opale Royal: ine-flavour ye-cherry futhi iqukethe ukhilimu, i-cognac ne-mint cream. Konke ngaphandle kokhilimu kuxutshwe neqhwa futhi kufakwe engilazini ye-cocktail. Bese ukhilimu ophehliwe uphendulwa bese kufakwa i-cherry.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Yimaphi ama-cocktails athandwa kakhulu e-Austrian?